Imigxobhozo yaBantwana - Umntwana Imfundo
Imigxobhozo ifana kanye nendlela evakala ngayo: imihlaba egutyungelwe ngamanzi anzulu. Ungazi njani ukuba indawo yimigxobhozo kwaye kutheni le nto ezi zinto ziphilayo zibalulekile? Fumana iimpendulo zale mibuzo nangakumbi ngeenkcukacha zemigxobhozo emnandi yabantwana, izinto ezinokuprintwa kunye nezixhobo zemultimedia.
Yonke imigxobhozo ikhona eyahlukileyo kwabanye ngenxa yendawo ekuyo kunye nesiseko. Zine iindidi eziphambili zemixokelelwano yemigxobhozo enokuthi ifundwe ngabantwana: imigxobhozo, imigxobhozo, iigodo kunye neentambo. Ukuze ufunde ngakumbi malunga nokuba injani indawo emanzi kwaye isebenza njani, jonga le vidiyo yomculo imnandi.
Iinyani ezinomdla zezilwanyana zaBantwana ezinemifanekiso
Izimvo zokuhombisa amaqebengwana abantwana
Iinyani zamahlathi emvula aBantwana
UMarshes azisoloko zigcwele amanzi kwaye ziqulathe amanzi amatsha, amanzi anetyuwa, okanye indibaniselwano yazo zombini. Iifama zomgxobhozo wamanzi ezikufutshane nomzimba wamanzi onjengomlambo, itheku okanye umlambo kwaye inqanaba lawo lamanzi lenyuka okanye linciphise umsinga. Umgxobhozo ongaphakathi elizweni ukwenzeka kufutshane nechibi okanye umlambo xa amanzi ephezulu.
Izityalo zemarsh eziqhelekileyo zibandakanya:
Abagxeki obafumanayo kumgxobhozo baquka:
ukuba uzothini kumntu oya emngcwabeni
Iintlanzi ezinje ngeShad kunye neHering
Imigxobhozo ifom kwiindawo ezikhukulayo okanye kwezinye iindawo ezinomjelo ombi kwaye zihlala zinomhlaba omanzi okanye amanzi amileyo. Umahluko ophambili phakathi komgxobhozo kunye nomgxobhozo luhlobo lwezityalo ezikhulayo kuzo. Imigxobhozo inemithi ngelixa imigxobhozo ingenayo.
Izityalo zomgxobhozo eziqhelekileyo zezi:
Izilwanyana onokuzibona kumgxobhozo zezi:
Iibhokhwe ziqulathe amanzi amatsha kuphela kuba ondliwa yimvula kwaye abakho kwimozulu ezisemantla ngaphakathi kwamachibi echibi anemijelo engcolileyo. Umhlaba ebhog uziva ngathi sisiponji esine squishy kwaye ugqunywe yipeat, ebola yinto yezityalo.
Izityalo onokuzifumana kwibhokhwe zibandakanya:
Abagxeki abaqhelekileyo be-bog zezi:
Inwele ezinqabileyo ezinqabileyo
Iifeni Inamanzi amatsha kuphela kuba ondliwa ngamanzi aphantsi komhlaba. Ezi ntlobo zemigxobhozo zinqabile kwaye ziqulathe iintlobo zezityalo nezilwanyana ngaphezu kwayo nayiphi na eminye imigxobhozo.
Izityalo eziqhelekileyo zefen zibandakanya:
Izidalwa onokuzifumana zihlala kwifeni zezi:
Imigxobhozo Ehlabathini Lonke
Imigxobhozo yahlukile, intle kwaye yenzeka kwiindawo kwihlabathi liphela. Jonga ezi imigxobhozo edumileyo :
Inkqubo ye-EFlorida Evergladeshlala ebhedini yelitye lekalika kwaye uncede ukwenza amanzi acocekileyo kwiindawo ezahlukeneyo zikarhulumente.
Omnye wemigxobhozo emikhulu ehlabathini yiPantanal eqikelelwa kwi-150,000 yeekhilomitha eBrazil, eBolivia naseParaguay eMzantsi Merika.
Ostreliya likhaya leMigxobhozo yaseKakadu egcina amahashe asendle, iinyathi kunye neengwenya kunye.
Izinto eziphila kumgxobhozo Uncedo abantu, izityalo nezilwanyana ngeendlela ezininzi. Banemveliso emangalisayo, badlala ikhaya kwiintlobo ezahlukeneyo kwaye bakhusela amanzi. Ezinye zeenkonzo zazo zibandakanya:
ungasusa njani ibala leinki kwindawo zomisa
Ukubonelela ngemithombo eyahlukeneyo yokutya ukuxhasa itsheyina lokutya
Ukuphucula ngokwendalo umgangatho wamanzi
Ukukhuthaza iyantlukwano yobomi
Ukukhusela kumonakalo wezikhukula
Imigxobhozo zigubungela malunga neepesenti ezintandathu zoMhlaba, kodwa kumashumi ambalwa eminyaka edluleyo, iUnited States iyodwa ilahlekelwe sisiqingatha semigxobhozo. Malunga neepesenti ezingama-30 zezilwanyana ezisengozini okanye ezisengozini yokuhlala eUnited States zihlala kuphela kwimigxobhozo. Ukukhusela ezi ndawo akuncedi nje ezi zilwanyana kodwa kubonelela ngezixhobo ezibalulekileyo nakubantu.
Vavanya ulwazi lwakho kwaye ufunde okungakumbi malunga nemigxobhozo ngemisebenzi yolonwabo malunga nemigxobhozo, indalo, izityalo kunye nezilwanyana.
Ukukhangela kumhlaba omanzi uze ufumane
Zininzi izinto eziyingozi okanye ezisongela ukwenzakalisa imigxobhozo kunye nezilwanyana ezihlala apho. Ngaba uyazibona ezi zinto ziyingozi zifihliwe kule ndawo? Cofa kumfanekiso ukuze ukhuphele kwaye uprinte ukukhangela kwemigxobhozo kwaye ufumane. Faka umbala kwiphepha elipheleleyo uze wenze isangqa kwizinto eziyingozi njengoko uzifumana. Ukuba unengxaki, okuIsikhokeloineengcebiso namacebo okunceda ekusombululeni iingxaki.
Ukutshatisa Umhlaba omanzi
Zininzi izilwanyana kunye nezidalwa ezihlala kwimigxobhozo kwaye zonke ziyinxalenye yokutya. Sebenzisa eli phepha lokusebenzela ukuvavanya ulwazi lwakho malunga nokuba zeziphi iintlobo zezilwanyana ezitya kule ndawo yokuhlala. Cofa kumfanekiso ukuze ukhuphele iphepha lokusebenzela emva koko ucofe i icon yokuprinta. Krwela umgca osuka kwisilwanyana ngasekhohlo uye ekutyeni esikutyayo ngasekunene.
Umsebenzi Wokutshatisa Amanzi Amanzi
Imidlalo eyonwabisayo yekhompyuter ikunceda ufunde ngakumbi malunga neenyani zemigxobhozo yabantwana kwaye usebenze njengovavanyo lwento osele uyazi. Jonga eziiwebhusayithi yesayensiyemisebenzi yokuhlangana kwemigxobhozo.
ukuba wenzeni xa iqabane lisweleka ngequbuliso
Inkqubo ye- Imigxobhozo yasendle Umdlalo phantsi kwecandelo leVancouver Aquarium unendawo yokuhlala emgxobhozo kwaye ikubuza ukuba ucofe kwimifanekiso okholelwa ukuba inokulimaza indalo.
Ukwenza umsebenzi opholileyo ngakumbi zama Incwadi Yemibala Yamanzi . Ukhetha isilwanyana emva koko ucofe iipensile ezinemibala ukufakela umbala kwisidalwa sakho semigxobhozo.
Iindawo Ezitshabalalisayo: Ngaba ngumthetho woMlingo? yimfuno yewebhu eyilelwe ukulandela ikharityhulamu yebanga lesihlanu eyalela abantwana ukuba baqokelele iinyani kwaye benze ipowusta malunga nendlela abantu abanokunceda ngayo ukukhusela imigxobhozo.
Iincwadi Malunga Nemigxobhozo
Zininzi iindidi zemigxobhozo kwaye nganye nganye yahlukile. Ukufunda iincwadi okanye ukubukela imovie malunga neendawo zemigxobhozo kunye nezilwanyana kunceda ukugcina ulonwabo kunye nokufunda kuqhubeka.
Abafundi abancinci bathabatha uhambo ngayo yonke into engentla nangaphantsi kwamanzi Nanku uMhlaba omanzi Incwadi enemifanekiso kaMadeleine Dunphy.
Imigxobhozo Ngaphakathi Ngaphandle NguJames Bow ulungele abantwana abadala kuba ibandakanya iimephu, imisebenzi kunye neebhokisi ekugxilwe kuzo ukubonisa ulwazi oluyinyani malunga nale nkqubo yezinto eziphilayo.
Incwadi kaCathryn Sill Malunga neendawo zokuhlala: Imigxobhozo ibonisa abafundi abancinci ukuba yintoni umgxobhozo, ngubani ohlala apho kwaye kutheni kubalulekile.
Abantwana bangazisebenzisa ezi zixhobo ukuze bafunde ngelixa abantu abadala bezisebenzisa ukudala iiyunithi ezibanzi zabantwana malunga nemigxobhozo. Ewe, akukho nto inceda abantwana bafunde ngcono kunokuba befumana imigxobhozo. Ukuba unemigxobhozo kufutshane, thabatha abafundi babone eyona migxobhozo yokunceda ukomeleza ukufunda.
Iindidi E Costumes Ukuhlela Tips Ukuthandana Conversation Topics Iinwele Style Pictures Umtshato Dresses
iindlela ezihlekisayo zokucela intombazana ukuba igoduke
Kuthatha ixesha elingakanani ukulungisa iirhafu
Yintoni injongo yeHalloween
Ulujonga njani ulungelelwaniso lwenkxaso yomntwana wam